WAR-MURTIYEED KASOO BAXAY URURKA WABAAHINTA PUNTLAND “MAP” | puntlandi.com
WAR-MURTIYEED KASOO BAXAY URURKA WABAAHINTA PUNTLAND “MAP”
Madaxda & Hawl-wadeenada Ururka Warbaahinta Puntland (MAP), waxa sharaf-weyn u ah in ay xubnaha ururka meel ay joogaanbe (Dal & Dibbad) ku war-galiyaan in sidii hore loo qorsheeyey 18 December 2017 uu si rasmiya u furmi doono Shir-weynihii 3aad ee ururka MAP oo ka dhaci doon Caasimada Puntland ee Garowe “ Hadii Eebbe idmo”.
Waxaa kale oo masuuliyiinta iyo hawl-wadeenada ururku ay ku faraxsan yihiin in si heer sare ah ay hawlaha qaban qaabadu iyo diiwaan-galinta xubnaha ururka ay u socdaan, todobaadka soo socdna la shaacin doona qaabka iyo shuruudaha lagu soo xuli doono ergada shirweynaha.
Waxaa kale oo Hoggaanka iyo hawl-wadeenada ururka, ay la wadaagayaan xubnaha ururka in Guddiga Fulinta ee MAP ay go’aamiyeen kana tanaasuleen awoodoodii sharci ee xeerka ururku siiyey ee aheyd in Guddiga Fulinta MAP ay soo xullaan Ergada Gobol-walba u mataleysa Shirweynaha, arinkaas oo haatan lagu badaley hannaan hufan oo dumuqraadiya oo awooda siinaya in Gobol waliba xubnaha ka hawlgala ay soo xulan-doonnaan Ergada u mataleysa gobolkooda Shirweynaha.
Tallaabadan ayaa Guddigu waxa uu uga gol-lahaa in tallada la baahiyo si xubnaha Gobol-waliba ay fursad ugu helaan inay ka tashadaan Ergada ay shirka u dirsanayaan sidoo kalena hannaankan waxa kale oo uu jaanis siinayaa shaqsiyaadka aqoonta iyo hoggaaminta lagu tuhunsanyahay ama sumcada ku dhex leh warfidiyeenka iyo bulshada kale ee gobol kasta.
Guddoomiyaha Ururka MAP, Faysal Khaliif oo shirkii Lixaad ee Guddiga Fullintu, si rasmiya u sheegey inuusan murashax u aheyn xilka Guddomiyaha Ururka ayaa ku nuux-nuuxsaday in go,aanka ay gaadheen Guddiga Fulintu uu yahay mid taariikhiya oo horseedi doona in Gobol waliba uu shirweynaha u soo dirsan doona shaqsiyaad sumcad, akhlaaq, iyo aqoon leh, oo dhabaha u xaara in hoggaanka aynu dooranaa ay fursad u heli doonnan inay soo xushaan xubnihii la shaqeyn lahaa oo ay ku xushaan aqoon iyo masuuliyad sidaasna lagu dhiso Guddi Fulineed oo aan xal aheyn balse xul ah oo yaqaan masuuliyada loo dhiibtay.
Sidoo kale Guddiga Fulintu waxa go’aamada kale ee ay qaateen wax aka mid ahaa in Sagaalka xubnood ee guddiga fulinta ee ururka hoggaamin doona lagu jaan-goyne doona Sagaalka Gobol ee Puntland ka koobantahey, balse Gobolladu uma sinnaan doonaan tirada Ergada shirweynaha u mataleysa waxayna u kala badsan doonnan oo lagu jaan-goyndoonaa sida ay u kala badan yihiin tirada suxufiyiinta ka hawl-gala Gobollada, waana sida ku xusan xeerka ururka.
Ugu danbeyntii Guddiga Fulinta “MAP” waxay ay ku dhiirigaliyaan suxufiyiinta inay fursadan ka midho-dhaliyaan oo ay muujiyaan xaddaarad iyo wadda tashi oo aysan noqon kuwa isqab-qabsadda oo aan tallo wadaagin oo ku sifooba qab-qablayaal iyo loo dhamma. Gobol-walba marka Guddiga Fulintu u soo gudbiyo tirade ergada.
Gobolkooda waa inay tashadaan oo caqli ay ku shaqeeyaan, is ixtiraamaan soona xushaan ergo guul u soo hoyn karta oo iyaga matasha. Gobolkii ku guuldareysta hannaankan ee tashan waayo waxaa khasab ku ah Guddiga Fulinta MAP inay faragaliyaan oo ay u go’aamiyaa cida matali doonta.
“HADAA TASHAN WEYDO WAA LAGUU TALIN”